Al-Qaacidada Jaziiratul Carab oo sheegtay masuuliyadda Weerar ka dhacay Maraykanka. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Al-Qaacidada Jaziiratul Carab oo sheegtay masuuliyadda Weerar ka dhacay Maraykanka.
On Feb 3, 2020 1,227 0
Mu’assasada warbaahineed ee Al-Malaaxim ayaa baahisay kalimad muhiim ah oo uu jeedinayo hogaamiye Sheekh Qaasim Ar-riimi oo ah amiirka guud ee Mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jaziiratul Carab, tas oo uu kaga hadlayo weerarkii cuslaa ee Florida.
Kalimadan oo ciwaankeedu yahay Wa Yashfi Suduura Qowmin Mu’mininin ayaa la dhageysan karaa qadar 18 daqiiqo ah, waxaana uu sheikh Qaasim ku sheegayaa in Mujaahidiinta Alqaacida ay masuul ka ahaayeen weerarkii Florida ee ka dhacay saldhig ay ciidamada Maraykanka ku leeyihiin gobolka Florida ee wadanka Maraykanka.
Sheekh Qaasim Ar-riimi amiirka guud ee Mujaahidiinta Alqaacida ee Jaziiratul Carab wuxuu soo hadal qaaday weeraro waaweyn oo ka kala dhacay Afqaanistaan iyo Soomaaliya oo uu ku jiro weerarkii weynaa ee Bellidoogle, kaas oo Naftood huriyaal katirsna Xarakada mujahaidiinta AlShabaab ku dileen 120 askari oo Maraykan ah.
Wuxuu sheegay Sheekhu In weeraradaas iyo kii Florida ay dhamaantooda yihiin kuwa jawaab u a h dowladda Maraykanka oo umadda muslimka ah kula kacday tacadiyaad farabadan.
Kalimadda muhiimkan ee uu jeedinayo Sheekh Qaasim Ar-riimi amiirka guud ee mujaahidiinta Alqaacida ee Jaziiratul Carab, wuxuu baaq ugu jeediyay guud ahaan musliminta caalamka, gaar ahaan kuwa ku nool Maraykanka, isagoo ku dhirageliyay iney qaadaan weeraro lagu beegsanayo danaha Maraykanka iyo masaalixdiisa.
Kalimadda uu jeediyay Sheekh Qaasim Ar-riimi waxaa ku lifaaqnaa farriimo uu reebay Muxamad Siciid Ash-shumaraani oo ah fuliyaha weerarkii Florida ee dhamaadkii bshii Decembar sanadkii 2019-ka uu ku beegsaday saldhiga Bensacola, halkaas oo uu ku dilay sarkaal oo Maraykan ah kuna dhaawacay 11 kale.
Mid kamid ah farriimaha uu la wadaagay lajnada qaabilsan howlgallada dibadda ee Mujaahidiinta Alqaacida ee Jaziiratul Carab, wuxuu Muxamad kaga sheekeynayaa tababarada uu soo qaatay iyo xeyndaabyada amni ee uu kasoo gudbay.
Farriin kale ayuu kula hadlayaa hooyadii dhashey iyo caruurtiisa, isagoo hooyadiisa ugu baaqaya iney sabarto haddii uu soo gaaro warka la xiriira inuu shahahiiday ama la qabtay, isagoo dhanka kale caruurtiisa kula talinaya iney quraanka ku dadaalaan, una duceeyaan Muslimiinta dhiban.
Mujaahidiinta Alqaacida ee Jaziiratul Carab ayaa ah mid kamid ah faracyada halista ugu badan ku haya amniga iyo masaalixda Maraykanka, wuxuuna masuul ka yahay camaliyaad dhowr ah oo ka dhacay gudaha wadamada reer galbeedka iyo dowladaha ku jira safka la dagaalanka waxa loogu yeero Argagaxisada.